Waxaan hadda keydin karnaa Oukitel K9 | Androidsis
Maalmo ka hor, waan ka hadalnay Oukitel K9, terminaal saacado kooban aan horey ugu keydi karno websaydhka soo saaraha ama AliExpress. Terminalkan wuxuu na siinayaa a shaashad weyn oo 7,12 inji ahTani waa soo jiidashadeeda ugu weyn marka lagu daro batari 6.000 Mah.
Laakiin maadaama aadan ku noolaaneyn oo keliya shaashadda illaa batari ku dhegan, xitaa haddii ay tahay labo ka mid ah wanaagiisa ugu weyn, Marka xigta waxaan kuusoo bandhigi doonaa dhamaan qeexitaanada terminalkan cusub, terminal kaas oo aan awoodi doono inaan ku raaxeysano fiidiyowyada aan jecel nahay meelkasta oo aan ka walwalayo batteriga.
1 Soo baar waxa aan dooneyno
2 Waxqabadka iyo qaabeynta
3 Kaamiro ay sameysay Sony
4 Halkee laga iibsadaa Oukitel K9
Soo baar waxa aan dooneyno
Oukitel K9 wuxuu na siinayaa shaashad 7,12-inji ah, shaashad leh FullHD + qaraar (1080 × 2244) iyo xoogaa yar oo ah qaybta sare ee shaashadda oo ah qaab biyo ah taasina si dhib leh uma saameynayso aragtida waxa ku jira.
Waxqabadka iyo qaabeynta
Gudaha Oukitel K9 waxaan ka helaynaa processor-ka ugu awoodda badan ee soo saaraha processor-ka MediaTek, Helio P35, processor oo na siiya awood badan labada hawl maalmeed iyo ku raaxeysiga cayaaraha ugu awooda badan suuqa. MediaTek Helio P35 waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo 12 nanometer oo xawaare ah oo xawaare ah oo gaaraya 2.3 GHz, halka GPU-na uu ku socdo 680 MHz Oukitel K9 waxaa wehliya 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah.
6.000 mAh baytariga waxay taageertaa lacag siinta degdega ah iyo saacad iyo badh gudahood, waxaan si buuxda u buuxin karnaa baytariga. Naqshadda dhabarku waxay qaadataa saameyn muuqaal oo dhalaalaysa labada nooc ee jet madaw iyo nooca buluuga ah ee dhalaalaya, waxay kuxirantahay sida isha iftiinku u muujinayo
Kaamiro ay sameysay Sony
Una vez más, ragga ka socda Oukitel waxay aamineen Sony qaybta sawirada, gaar ahaan qaabka IMX298 ee kamaradda weyn, 16 mpx shidma oo ay weheliso caawiyaha 2 mpx, si saamayn qoto dheer loogu yeesho sawirka loona awoodo inuu qariyo asalka. Dhinaca hore, waxaan ka helaynaa kamarad 8 mpx ah.
Halkee laga iibsadaa Oukitel K9
Sida aan kor ku soo sheegay, Oukitel K9 ayaa hadda loo heli karaa boos celin. Haddii aan ka faa'iideysano xilligan iibinta ka hor, inta u dhexeysa 13-ka ilaa 20-ka Maajo, waan awoodi doonnaa ku hel tusaalahan kaliya $ 199,99 iyada oo loo marayo AliExpress ama loo maro bangoodQiimaheeda ugu dambeeya marka si rasmi ah suuqa looga bilaabo waxay noqon doontaa 249,99 dollar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Oukitel » Hadda waxaan haysan karnaa Oukitel K9